ikhaya » Okufumaneka » Musa Ukushiywa Ngaphandle Kwebusika: Ukubaluleka Kwemigangatho Yolwazi
Musa Ukushiywa Ngaphandle Kwebusika: Ukubaluleka Kwemigangatho Yolwazi
nguRichard Brandon, i-CMO, i-Edgeware
Game of Thrones (GOT) kunye I-Tale's Handmaid's Tale baye bagcina abaphulaphuli kwimida yabo - kwaye kungekhona nje ngenxa yokulwa kweTrone yesiTrone okanye ukulwa neGiliyadi. Xa i-GOT ibonakalisa i-season premiere yayo, i-HBO iya e-US kunye ne-Foxtel e-Australia yaphahlazeka. Abo balahlekelwe ukulwa kunye neenkonzo zabo ze-OTT benza ntoni ababukeli abanonkcenkcesha kwi-2017 - babelane ngokukhungatheka kwabo kwi-Twitter.
Kungekudala Game of Thrones iqhube isiphepho se twitter, I-Tale's Handmaid's Tale yayiyinkokheli yokuqwalasela xa umdlalo we-dystopian obundlobongela wawuphazamiseka rhoqo kuwo wonke amanxibelelwano kuwo wonke umhlaba ngeemeko ezingabonakaliyo kwaye zingabonakaliyo ezivela kwii-IUD ukuya kwiimvavanyo zokukhulelwa - konke ekuboniseni malunga nabasetyhini bepropati yombuso kwaye banyanzeliswa ukuba bangene. Ababukeli bebukele inkonzo ye-IP ye-IP ye-IP ye-SBS ikhuphelwa ngeentengiso ezikhulayo phakathi kwesivakalisi, kungekho sithuba esifanelekileyo.
Ukuba ngababambisi bokuqukethwe kwezi zibonisi abakwazi ukuqinisekisa umgangatho ophezulu wamava (i-QOE) kwiinkqubo ezinokuthandwa, ukulindela kunye nomdlalo omkhulu I-Tale's Handmaid's Tale or Game of Thrones, icela umbuzo - ngaba iTV ibulale ngokwayo namhlanje? Ngeliphi iphuzu ukwenza oku kuphazamiseka komxholo kunye nezivakalisi ezivuthayo ziqala ukuqhubela abantu kwi-piracy?
Ukudibanisa kwindlela eya eWesteros
Kwimfazwe yokulwa nokusela, kwakunjalo Game of Thrones'ukuthandwa kwaso kwandinceda ekubambeni kwayo. Ixesha eliyisixhenxe lepereyeri eyedwa yabukwa ngaphezu kwee-16 izigidi ngezihlandlo zomthetho - ezizigidi eziziithandathu zazo zanikelwa kwi-intanethi. Izixhobo zonxibelelwano zeewebhsayithi azizange zikwazi ukugcina le mfuno, nangona, ukuphazamiseka okukhulu kwihlabathi jikelele-kubandakanywa nase-US nase-Australia. Ngaphezulu kwezi zimbono zezomthetho ze-16 zezigidi, isiqendu sasiye kuxelwe ngumbutho we-pirate analyst inkampani MUSO ukuba ibukelwe i-90 yezigidi ngokungekho mthethweni. Eli nani liquka imilambo engekho mthethweni, imilambo kunye nokulandwa. I-Pirira ayifanele ibhekwe njengeyona ndlela ethembekileyo.
Ukuba ukhangele indlela oku kuhanjiswa ngayo lo mxholo, ukuthungulula i-traffic kufuneka kucatshangelwe ngendlela yokuhamba kwendlela. Kungenxa yokuba akukho sithuthi ngaphandle kwendlu yakho, oko akuthethi ukuba iindlela eziya kwiofisi yakho azihambelani. Njengoko ungena kwi-intanethi, inqanaba elihlanganisiweyo leTTT liyabakha kwaye lakha. Kwaye le ndawo izokuqhubeka nokuzakhela ukusetyenziswa kwevidiyo kwi-intanethi, ngokukodwa ngokuphakama kwe-4K.
Iigorila kwiimarike zithintela iintlekele zokuhambisa iintlobo ngokuziphendulela kumanethiwekhi okubonelela ngeenkonzo zethelevishini (i-CDN TV) ukunceda ukuqhubeka kunye nenani elikhulayo labasebenzisi. I-Netflix yedwa yakha amaseva e-1600 yee-hardware kumanethiwekhi abo okuhambisa. I-CDN yeTV inceda umthengisi wokuqukethwe ukuba anikezele ngokuqulathekileyo umxholo, nangona kukho iipiksi zenzeke kwiimfuno zeenkqubo. Inkqubo igcina ikopi yemiboniso ethandwayo kwikhathalogu kwaye iyilungiselela kubasebenzisi abavela apho kunye nomncedisi ngamnye akwazi ukusabalalisa kwinani elincinci labantu basekhaya, kunokuba babelane ngomxholo wabo ngokusebenzisa inethwekhi enkulu kwinzame yokunikezela kwizigidi zabantu ababukeli kanye.
Le ndlela isendaweni ikhulula iindlela, ezivumela abasebenzisi ukuba bafikelele umxholo wabo ngokukhawuleza, bengakhange baqhube iindlovu endleleni.
Ukukhusela umxholo ovela kwii-pirates ze-intanethi
I-CDN ye-TV yangasese - njengaye Edgeware isisombululo - sinika umxholo ophezulu kakhulu kwizinga. Ukugcina iikopi zemiboniso ethandwayo kwiiservisi ezikufutshane nombukeli usindisa ubuninzi bee-bandwidth zenethiwekhi kwaye kunciphisa umngcipheko wokuxhaphaza ngokugqithisa ukudibanisa kwenethiwekhi.
Ubume be-CDN ukukopisha umxholo-ukuwuvula ukuze ube nobuqhetseba kwizilwandle ze-intanethi. Ukugcina umxholo ngokunikezelwa, kukho iindlela eziliqela abanomxholo abanokukhusela iafa zabo, zombini basebenzise uhlobo olusasazayo lwevidiyo ye-intanethi ukuze bafumane inzuzo. Enye yezindlela ezithandwa kakhulu zikwimo ye-watermarking esekelwe kwi-manifest.
Ukubonakalisa i-watermarking esekelwe ngokubonakalayo kubaluleke kakhulu ukudala umjelo ohlukile owenziwe ngamacandelo. Umxhasi (i-set-top-box, tablet okanye i-PC) icela enye inxalenye yesibini emva kwesinye ngexesha lokudlala. Inxalenye nganye ineenguqulelo ezimbini-A kunye no-B - kwaye njengoko zithunyelwa kumxhasi, ukuhlanganiswa okuyingqameneyo kwenkqubo kudalwe. Uluhlu lwale macandelo lubanjwe kwi-manifest eyenziwa ngumthengi kwaye enye inokuqatshelwa ukuba iphikisiwe.
Nangona le ndlela ebonakalayo ebonakalayo ibangela ikhowudi ekhethekileyo eyosinda kwi-CDN, imingeni ihleli. I-CDN ayifuni nje ukugcina umxholo ophindwe kabini, kodwa ukulandelwa kwexesha elide kunye ne-erasability kunokubona ama-pirates akhuphela iinguqu ezahlukeneyo zoononongo kwaye adibanise-oku kuthetha ukuba le ndlela inokulinganiselwa kokuphepha.
Indlela engcono, kwaye enye ephunyeziweyo kwi-TV ye-TV ye-Edgeware ye-TVN, ukufaka ikhowudi kwividiyo ngokwayo ngokuguqula ezinye iipekseli zeefowuni ngendlela engabonakaliyo kubaphulaphuli. Inkqubo ye-watermarking esekelwe kumlambo ibonisa inani elithile lamaphikseli ngaphakathi kwisakhelo, kwaye utshintshe kancane - umzekelo ukusuka kumnyama ukuya kumnyama omnyama.
Le khowudi yongezwa kwaye ifakiwe njengemethadatha ekhethekileyo kwaye ithunyelwe kwi-band kunye nomxholo. Inxalenye yesibini yale nkqubo ixhaphaza iibhloko ngaphakathi kwintlambo yamanzi ukudala ikhowudi ekhethekileyo kwinguqulo nganye ehambelanayo yevidiyo - ukuvumela abanikazi bokuqukethwe ukuba balandelele ngqo ukuba ngubani na umxholo ophihliweyo. Le nkqubo isebenza kubini IPTV kunye neenkonzo ze-OTT, nakwisisombululo se-4K okanye ifomathi ezintsha njengeVR.
Ibali elenziwe ngumntu
Ukuguqulwa kwe-US ukuya eGiliyadi akufanele kuthathele ukujonga okubanda kunye nokungabonakali kwamathuba okubukela abaphulaphuli. Phezulu kokuvumela ababukeli ukuba bathuthuke ngcono kunye nokukwazi ukulandelela ngokukhawuleza ama-Pirates, ii-CDN zesebe zangasese zenza abanikazi bokuqukethwe bakwazi ukulawula nokudala izikhangiso ezizodwa.
Nge-CDN ye-TV, abanikezeli bokuqukethwe banokuzijonga ngokwabo amava okubukela kunye nokufakwa kwezibhengezo zedijithali kunye nokubeka iliso nokuhlaziya yonke imiba yeenkonzo zabo zeTV. Uhlalutyo oluchanekileyo lubonelela ngolwazi olubalulekileyo lombukeli kuquka iinkcukacha zokuziphatha, imithombo yenkcazelo yangempela-njengokuba yeyiphi iklayenti esetyenzisiweyo - isicelo senethiwekhi kunye nedatha ye-CDN yesithathu.
Ukujonga i-analytics inokubambisana nokusebenza kwenethwekhi ukuqonda okuxabisekileyo, ukunika ababoneleli bokuqukethwe ukuba baqonde ababukeleyo, oko bakubukeleyo, indlela ababukele ngayo, kunye nemigangatho ekhoyo. Ivumela abanikazi beendaba ukuba babuyisele amandla kwaye balawule amava omxholo walabaphulaphuli.
Ukukhetha indlela efanelekileyo
Ukunceda abanikazi bokuqukethwe kunye nabasasazo banqume ukuba ngaba kufuneka benze utshintsho kwi-CDN ye-TV yangasese, kwaye banikeze umgangatho ophezulu kubabukeli, u-Edgware wamisela uhlalutyi uFrost & Sullivan ukuba acinge uphando oluthe ngqo emva kokuba, ukwakha i-CDN yangasese yinto efanelekileyo ukwenzela bona. Uphononongo lufumanise ukuba ngokukhawuleza ukuba ummiselo wabasasazi baqala ukunikezela umyinge weeyure zenkonzo ngosuku kwi-100,000 yabantu, kufuneka baqwalasele i-CDN ye-TV yangasese. Kwaye xa kuziwa kwiiprogram ezifana Game of Thrones, ukuba i-100,000 yinto ephosakeleyo elwandle ngamnye ngonyaka.
Unokufunda i-white Frost & Sullivan Apha.
URichard Brandon unamava angaphezu kwama-30 eminyaka kwiinkampani zeteknoloji zethungelwano kunye neTV, esebenzisana nabaqhubi kunye nabathengisi bezixhobo. Ngaphambi kokuba abe yi-CMO e-Edgeware, uRichard wayephethe isikhundla se-VP yoRhwebo lwehlabathi lonke kwiJuniper Networks, i-CMO kwi-Intune Networks nakwi-MLL Telecom, kunye nemisebenzi yokuthengisa kwiCisco Systems. URichard wachitha ixesha elide lomsebenzi wakhe waseBritish Telecom, esebenza ngokuphuhliso lwenkonzo entsha. Uthethile kwiiforam ezifana ne-NAB, IBC, iNkundla yeHlabathi yeBroadband kunye nePalamente yaseYurophu, kwaye ilungu lejury kwi-UK Film Festival.
SoftAtHome, MStar, iCES2017 ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-09-08
Previous: I-Hollywood Professional Association ivula i-2018 Tech Retreat Ifowuni yeePhepha
next: I-Densitron yenza i-8 entsha "I-TFT Display ifanelekile ekusasazeni
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Musa ukushiya ngexesha lobusika: ukubaluleka koMgangatho weeNkalo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/dont-get-left-out-during-winter-the-ance-of-quality-of-experience/. Enkosi.